ZFS Linux Ndị mmepe gbakwunyere nkwado maka FreeBSD | Site na Linux
Ndị mmepe ZFS Linux gbakwunyere nkwado maka FreeBSD
Ndị mmepe ndị na-ahụ maka isi koodu "ZFS na Linux" nke meputara n'okpuru nkwado nke oru OpenZFS dika ihe omuma nke ZFS, ha wepụtara ozi a n'oge na-adịghị anya nke gini nakweere ụfọdụ mgbanwe nke gbakwunye nkwado maka sistemụ arụmọrụ nke FreeBSD.
Ejiri koodu ahụ agbakwunye na "ZFS na Linux" na ngalaba FreeBSD 11 na 12. Ya mere, ndị mmepe FreeBSD agaghịzị mkpa idobe ngalaba ọrụ mmekọrịta ha nke "ZFS na Linux" na mmepe nke mgbanwe niile metụtara FreeBSD ga-ewere ọnọdụ na isi ọrụ ahụ.
E wezụga, nal FreeBSD arụmọrụ nke isi alaka ụlọ ọrụ "ZFS na Linux" n'oge mmepe sa ga-anwale ya na usoro njikọta na-aga n'ihu.
Cheta na en Disemba 2018, ndị mmepe FreeBSD butere ụzọ ịgbanwe ka mmejuputa iwu nke ZFS site na ọrụ ZFS na Linux (ZoL), nke ọrụ niile metụtara mmepe nke ZFS dị nso na nso nso a.
Ihe kpatara mbugharị bụ thelock of the Illumos project's ZFS codebase (fork nke OpenSolaris), nke e jiriburu mee ihe ndabere maka ịnyefe mgbanwe ZFS na FreeBSD.
Ruo oge na-adịbeghị anya, Delphix, ụlọ ọrụ mmepe maka sistemụ arụmọrụ DelphixOS, nyere onyinye kachasị na ịkwado koodu ZFS na Illumos (ndụdụ nke Illumos). Afọ abụọ gara aga Delphix kpebiri ịgbanwe gaa ZFS na Linux, kpaliri el ZFS uloanumaanu nke oru ngo Illumos na itinye uche nke mmemme metụtara mmepe na ọrụ ZFS na Linux, nke a na-ahụta ugbu a bụ mmejuputa isi nke OpenZFS.
Ebe ọ bụ na mmejuputa ZFS nke Illumos ya dị ezigbo mkpa n'azụ "ZFS na Linux" n'usoro nke arụmọrụ, Ndị mmepe FreeBSD ghọtara na obodo FreeBSD enweghị ike zuru ezu iji kwado ma zụlite onwe ya isi koodu dị. Ọ bụrụ n'ịnọgide na-eji Illumos, ọdịiche dị na arụmọrụ ga-eto naanị na nnyefe nke ndozi ga-achọ ọtụtụ akụ na ụba.
Kama ịnwa ijide Illumos, ZFS na ndị otu nkwado FreeBSD kpebiri ịnabata "ZFS na Linux" Dị ka isi mmepe mmepe oru ngo maka ZFS, na-eduzi ihe ndị dịnụ iji mee ka koodu gị dịkwuo elu ma jiri isi koodu gị dị ka ihe ndabere maka mmejuputa ZFS maka FreeBSD. A ga-etinye nkwado FreeBSD ozugbo na koodu "ZFS na Linux" ma mepee ya ọkachasị na nchekwa nke ọrụ a (ekwenyelarị okwu banyere nkwonkwo nkwalite n'otu ebe nchekwa na Brian Behlendorf, onye isi ọrụ ZFS na Linux) .
FreeBSD Mmepe kpebiri ịgbaso otu ihe atụ kachasị ma ghara ịnwa ijide Illumos, ebe ọ bụ na mmejuputa iwu a abanyelarị na arụmọrụ ma chọọ nnukwu ego iji jigide koodu ma nyefee mgbanwe.
"ZFS na Linux" ka ahuru ugbua dika onye ndu ọrụ mmepe mmeko pụrụ iche na ZFS.
Otu n'ime atụmatụ ndị dị na "ZFS na Linux" maka FreeBSD, mana adịghị na Illumos mmejuputa nke ZFS, kwụpụta ọnọdụ multihost (MMP, Multi Modifier Protection), usoro agbatị agbatị, izo ya ezo nke usoro nke data, nhọpụta dị iche iche nke klaasị klas maka mgbochi (klaasị klaasị), iji ntuziaka usoro vector iji mee ngwa ngwa RAIDZ na ngụkọta oge nke checksums, usoro ndozi usoro ka mma, yana ọtụtụ ndozi ahụhụ na ọnọdụ agbụrụ.
N'ihi ya nkwado FreeBSD maka ZoL ga-akwado mmeghari mgbanwe n'etiti FreeBSD na Linux, na mgbakwunye na ndị mmepe na-ekwu banyere ụfọdụ ndozi ga-enweta, nke ha kwuru banyere ya:
bubata FreeBSD SPL
tinye ifdefs na koodu nkịtị ebe ọ na-aba uru karịa ime nke a karịa ịmepụ koodu ahụ na faịlụ dị iche iche
N'ikpeazụ ee ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, you nwere ike ịlele nkọwa na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ndị mmepe ZFS Linux gbakwunyere nkwado maka FreeBSD